Ngaba olu luphulo lwentwasahlobo? | Martech Zone
Ngaba olu luphulo lwentwasahlobo?
NgoLwesibini, Aprili 3, 2007 NgoLwesibini, Oktobha 4, 2011 Douglas Karr
Kule veki ndikwiholide. Iphantse yandenza ukuba ndihleke ndisithi ngokuvakalayo. Nantsi indlela iholide yam ehamba ngayo ukuza kuthi ga ngoku:
Malunga neshumi leesayithi zam (okanye iisayithi zabaxumi bam) ziyahlaziywa ngoku. Iziza zihanjiswa kwiiseva ezintsha, ezikhawulezayo ezineenguqulelo zamva nje zazo zonke iisoftware. Oko, kunjalo, kukhokelela DNS Imiba (umhlobo wam osenyongweni kunye nesiza somthengi siphinde sahanjiswa kwiphepha lokugaxekile ubusuku bonke… ugh!), imiba yoqhagamshelo lwedatha, imiba yenguqulo, iingxaki zomxholo, imiba ye-plugin… uyiqamba igama. Bendihleli kude kube nge-6: 30 AM ngale ntsasa ndilungisa imiba. Ndishiye indawo enye (ewe, iyafana!).
Ndinewebhusayithi endiyisungulayo kule veki (kuba andinalo elinye ixesha) esele ngasemva kuphuhliso. Nangona kunjalo, ukuza kuthi ga ngoku ihambe kakuhle. Ndilayishe indawo yedatha yokubini ye Iidilesi ze-IP ezivela kuMaxmind kunye nekhowudi ebhaliweyo eya kuthi izenzele iimephu ezisekwe kumsebenzisi lowo undwendweleyo. Inguqulelo yasimahla ye API ayichanekanga kakhulu kodwa ubuncinci ikhokelela umntu kwingingqi elungileyo.
Umsebenzi uqalile ekwakheni iplagi yeWordPress ukwenza ujongano loMsebenzisi lucoceke ngakumbi. Ukusebenza akuguquki, kodwa ukujonga kunye nokuziva kuphuculwe kakhulu (jonga ngezantsi). Ndibuze uSean ku Geek kunye neLaptop ukundinceda. Ndilungile kuyilo lweWP kunye nemicimbi yesikhangeli esinqamlezayo, kodwa ndiqinisekile ukuba uSean unokuzisa le ekhaya.
Kwaye, abantwana bam basekhaya. Unyana wam ulungiselela iProm kwaye uya kuye YaseYunivesithi. Intombi yam igcwele "imowudi yentombazana" ke ifowuni iyakhala ingayeki kunye nolutsha olungena luphuma ngathi yiGrand Central Station. Ndizokutsiba ngefestile! Ngethamsanqa, ndikumgangatho wesibini.
Yongeza koku ukuba ndinqwenela ukonyusa ukubonisana kwam (ndithathe umvuzo osikiweyo wonyaka ophelileyo ngaphandle kwawo) ke iveki yam igcwele iminxeba kunye nesidlo sasemini.
Njani ukuba iholide? Andikwazi kulinda ukubuyela emsebenzini ukuze ndifumane ikhefu! (Hayi!)
Funda ukutya kwam kwaye ufumane iinyanga ezili-12 zokuSingathwa kweWebhu simahla
Epreli 3, 2007 ngo-7: 10 PM
Kuvakala ngathi ndikwikhefu.
Abantwana bam basekhaya kule veki, nabo. Yiyo iholide kubo * hayi mna okanye umfazi wam 🙂
Epreli 3, 2007 ngo-8: 32 PM
Hee Doug, ujonge phambili ekusebenzeni nawe kwiplagi yomlawuli.
Ndenze inqwaba yeeplagi zesiko zeWP zabantu kodwa andikaze ndiyikhuphele eluntwini kodwa loo nto sele iza kutshintsha kwiintsuku ezizayo kungekudala xa ndiqhuba ezinye iimvavanyo ezimbalwa.
Ukuba ishedyuli yakho… eh, ixesha leholide liyakuvumela 🙂 Ndingathanda ukuba ukhabe amavili kuyo.
Epreli 3, 2007 ngo-10: 40 PM
Indenza into ukuba kufuneka ndicinge kwakhona ngeholide yam! Abantwana baya kukuqhubela amandongomane!
Epreli 4, 2007 ngo-1: 17 AM
Ndingaba nomdla wokwenyani kwi-WordPress plugin oyikhankanyileyo. Kuyinqaba ukuba yonke into malunga namatye e-WP ngaphandle kokuthumela ujongano! Iingxaki zam ngayo kukuba zixinene kakhulu, kwaye ngekhe ususe i-clutter kwaye ujonge ekubhaleni kwakho.